Koety: Mitokona Tsy Misakafo Ilay Mafàna Fo Tsy Manana Zom-Pirenena. · Global Voices teny Malagasy
Koety: Mitokona Tsy Misakafo Ilay Mafàna Fo Tsy Manana Zom-Pirenena.	Voadika ny 03 Febroary 2013 9:40 GMT
Zarao: Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tao am-ponja ilay mpikatroka mafàna fo tsy manana zom-pirenena Abdulhakim AlFahdi, ny 16 Janoary teo, rehefa nandray ny saziny roa taona an-tranomaizina. Nampangain'ny fitsarana fa namely mpitandro filaminana iray tamin'ny hetsi-panoherana natao tamin'ny volana Marsa teo ity mafàna fo ity. Nolazain'ilay mpikatroka mafàna fo fa noforonina mba hiampangàna azy ity fanenjehana ity noho ny hafanam-pony ara-politika amin'ny fangatahana ny zon'ny vondrom-piarahamonin'ireo tsy manana zom-pirenena any Koety. Tany ampiandohan'ny volana Des 2012 izy no nosamborina niaraka tamin'ny rahalahiny AlFahdi Abdulnasser izay tsy voaheloka tamin'io raharaha io ary nafahana. Ity ny ampahany amin'ny dikantenin'ny tatitra nataony araka ny nanoratan'i Jadaliyya azy:
Ny 16 janoary 2013 amin'ny 7 ora hariva, ambarako ôfisialy avy ato amin'ity toeram-pigadran'ny fahalalahana ato amin'ny Fonja Foiben'i Koety ity fa hitokona tsy hisakafo mandritra ny fotoana tsy voafetra aho ho fanoherana ny tsy fahamarinana sy ny ireo trangan-javatra tsy rariny foronin'ny rafitra fitoandroana filaminana ahy. Andramany ravana ny fiainako, ny lazako, ny ho aviko ary ny fahalalahako. Ampoijalian-dry zareo aho ary tereny hampiato ny hafanam-poko ho an'ny tsy manana zom-pirenena aty Koety. Tsy hiato amin'ny fitokonako tsy hisakafo aho mandra-paha 1) Afahana aho ;
2) foanana ireo zavatra noforonina hiampangana ahy ; 3) atsangana ny komity nasionaly tsy miandany hanao ny famotorana momba ny fangalana an-keriny, ny fisamborana, ny fampijaliana, ary ny famoronana antontan-taratasy ho fanenjehana ireo mafàna fo, isan'izany ny momba ahy.
Angamba, ity no hafatro farany ho anareo aloha, satria inoako fa hisy fiantraiany ao aorian'ny fandefasana ity hafatra ity amin'ny haino aman-jery sy ho an'ny vahoaka. Fantatro fa hatoka-monina aho, lavitry ny hazavan'ny masoandro ary ny olona, mba ho saziko amin'ny fampiasàko ny zoko mba hiarovako ny fahafahako amin'ny alàlan'ny fitokonana tsy hisakafo.
Nanao hetsi-panoherana tany Taimaa ilay vondrom-piarahamonina ho fanoherana ny sazy famonjàna, fotoana fohy taorian'izay fanambaràny izay. Ireto misy sary vitsivitsy nozarain'ireo mpikomy tao amin'ny Twitter :
Mpihoko iray manao T-shirt misy ny sarin'ilay mafàna fo sy ny teniny malaza ” Aza avela ny zonareo” (nalefan'i @robn_hod)
Nandefa hafatra ho firaisan-kina amin'i AlFadhi ireo mpibitsika sasany. Kaonty iray natokana ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona ao Koety no nandefa ity lahatsary manaraka ity izay nitafatafàna tamin'i AlFadhli :
@rightskw: Ity lahatsary ity no antony nahazahoan'i AlFadhli sazy roa taona an-tranomaizina. Tatitry ny famoretana ny Bedoon [tsy manana zom-pirenena] izay niresadresahana tamin'i Abdulhiakim ity.
Izao no nosoratan'i Ahmed AlAounan mafàna fo tsy manana zom-pirenena :
@ahmedal3onan: Miditra amin'ny andro faha-enina amin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina ny gadra maherifontsika Abdulhakim AlFadhli, miha-ratsy ny teo-pahasalamany ary dia mangina ireo ONG. Firaisankina ho an'io lehilahy afaka io.
Nitatitra ny toe-pahasalaman'i AlFadhli ny mafàna fo iray:
@alnssar1:Vao avy nanamafy ny vaovao aho fa safotra tao amin'ny toeram-pigadrany i AlFadhli, ireo gadra hafa no niantso ny mpiandry, ary nentina tany amin'ny toeram-pitsaboan'ny fonja izy 5 andro taorian'ny fitokonany tsy hisakafo.
@alnssar1: Mijaly noho ny fitokonany tsy hisakafo izy, indrindra noho ilay voany havia. Mbola any amin'ny toeram-pitsaboan'ny fonja foana izy.
Maro no nihetsika noho ny toe-pahasalaman'ilay mafàna fo ary niantso azy hanajanona ny fitokonany.
@althuwaini: Falah AlThuwaini no anarako. Miantso an'i Abdulhakim AlFadhli aho mba hampiato ny fitokonany tsy hisakafo.
@Fatma_alhayyan: Miantso an'i Abdulhakim AlFadhli mba hanajanona ny fitokonany tsy hisakafo. Mila olona tahaka anao izahay mba hiaro ny tsia. Tranga 1 amin'ny rsaka zon'olombelona no eto.
Nanoratra ho fanehana firaisankina ny Mpibitsika sasany :
@Nietzsche69k: Maharary izao fahanginana izao ry vahoaka Koetiana ! Maharary izao fahanginana izao, ho anareo izay mamaky ity bitsika ity ! Any am-ponja sady mijaly no marary i Abdulhakim AlFadhli noho io fahanginana io satria mitokona tsy misakafo izy.
Nisy ” tsy manana zom-pirenena tsy nitonona anarana” namorona tenifototra ho an'ny zava-mihatra amin'i AlFadhli, andro vitsy taty aoriana:
@AnonStateless: #Koety tsy nahatsiaro tena ny #mafàna fo tsy manana zom-pirenena @Hakeemq80 5 andro taorian'ny fitokonana tsy hisakafo. aparitaho ny tenifototra #SaveHakeem